Traian Basescu - Prezident Rumynii kusuka 2004 kuya ku-2014-th, manje bancishwa yisakhamuzi baseMoldova. Umkhakha osanda kuqokwa uMengameli baseMoldova I. Dodon wathi Basescu ekutholeni yisakhamuzi wephule umthetho we the Republic of Moldova.
Traian Basescu: Biography
Idolobhana Romanian ka Basarabi lapho ngo-1951-November 4, wazalwa owayezoba umongameli, manje kabusha Murfatlar. uyise kaTrajan kwaba yisosha.
Ngemva kokuthweswa iziqu, navigation civil (Constanta) ngo-1976 Traian Basescu wema ibhuloho elikhulu umkhumbi ukuhweba ejensi "navreno".
Ngo-1987 wamiswa njengephayona elivamile ikhanda lika-ejensi e-Antwerp.
Ngo-1989 wathatha izintambo njengesikhulu esiphezulu kule Inspectorate State for navigation empini, adalwe Ministry Romanian wezokuThutha.
Ngo-April 1991, Basescu waqokwa nguNgqongqoshe wezokuThutha. Ngekhefu ezimbili ephethwe Ministry of ezokuthutha yeRomania kwaze kwaba maphakathi 2000
Ukunqoba edolobheni wendawo umkhankaso wokhetho ngo-2000 wamvumela ukuba-ngenyanga ngo-June babe imeya inhlokodolobha Romanian.
12.12.2004 uMnu Traian Basescu, ogama isithombe kwaba emakhasini phambi nakomagazini eziningi ezahlukene, wanqoba umzuliswano wesibili wokhetho lobumengameli,.
Wayengumuntu umsekeli oshisekayo Ukuhlanganiswa yaseYurophu futhi panrumynistom. Abalindi kuze kube yilapho Romania ijoyina European Union, ngo-2005, wabenzela icebo kokuhlanganiswa nge Moldova. Nokho, abaholi baseMoldova sasimathintanyawo yephrojekthi.
1.01.2007 Romania wajoyina European Union.
Ngo-April 2007, umsebenzi okhethekile ePhalamende uye wasembulela amaqiniso yokudlula ikhanda Romanian kwamandla wombuso anikezwe wona umthethosisekelo.
Kuthathelwe izinyathelo kuqala
Kususelwa okwatholakala ekuqaliseni Commission, iPhalamende umemezele kuthathelwe izinyathelo kamengameli. amasekela amathathu namashumi amathathu nambili namavoti senators 'baphonswa ngoba kuthathelwe izinyathelo, nakuba lokhu kuyodingeka lokushaya amavoti angu-235 kuphela. Akazange ayisekele nendlela kuthathelwe izinyathelo amalungu 108 ukuvota ephalamende.
19.05.2007, udaba yokwesula kamengameli sathunyelwa inhlolovo. Imiphumela yabonisa ukuthi abangamaphesenti angu-75 izakhamuzi Romanian owayefuna ukuhamba umongameli ehhovisi.
Ukunikeza ukhetho ngo-2009
Ngo-December 2009, Trayan Besesku waya emzuliswaneni wesibili wokhetho lobumengameli, okuyinto kukora amaphesenti 50.33.
Ekupheleni 2010, kwamenyezelwa ukuthi nimunye Moldova Kungafezani ezilandelayo isikhathi Ngonyaka wamashumi amabili nanhlanu, kodwa kamuva lesi sitatimende ngesikhathi disavowed.
Phakathi iminyaka engu-70 ngonyaka ngosuku okwenzeka ngalo kokuqala uhlelo "Barbarossa", umongameli-Romanian bavikela umashiqela Antonescu asekele izenzo zakhe iminyaka engamashumi ayisikhombisa edlule. Ikakhulukazi, wasekela isinqumo of Antonescu ku umthelela oda 22.06.1941 Okokuqala, ngesisekelo eye waqhubeka ngomfutho emfuleni Prut umkhawulo ezaphulwa phakathi kweRomania eSoviet Union.
isitatimende okunjalo kwaholela ilandelana zokubonisana phakathi Belarus Romania ngasekupheleni kuka June ka-2011.
Ngo-January 2012 abantu Romanian khumbula imibhikisho mass, ezwakalisa ukunganeliseki ohlongozwayo kabusha ukunakekelwa kwezempilo. Iziqubulo ababhikishi abangu izingcingo ukuze ukwesula uhulumeni kanye nomongameli.
Umphumela wale izenzo kwaba ukwesula uhulumeni, E. Bock.
Eyesibili kuthathelwe izinyathelo
6.07.2012 Romanian ePhalamende liye kabusha okufakiwe kuthathelwe izinyathelo uMengameli Jacob Zuma. Uthe lesi sinqumo senziwa iPhini amavoti 258. Eyikhulu nane kanye namasekela futhi senators aphume 432 wavumelana nalokho.
UMengameli obambile Ezingamabamba ezimisiwe okwesikhashana iSigele uMongameli Crin Antonescu, owayehola Romanian National Liberal Party.
Inhlolovo ku kuthathelwe izinyathelo owawuse 29.07.2012. Ngobusuku obandulela Trayan Besesku ibize baseRomania ukuze duba inhlolovo.
Kuthathelwe izinyathelo sasekelwa amaphesenti angu-87 abavoti, kodwa kusukela abeze kwaba ongaphakeme (amaphesenti angu-46 kuphela omphakathi), imiphumela inhlolovo abangu nilenze.
Ngemva ukuqashelwa we-Romanian eNkantolo yoMthethosisekelo nilenze laba yize imiphumela inhlolovo, Basescu abe ngumengameli waphinda bafeza izabelo zabo.
Ehlobo lika-2012, Traian Basescu wangaphambili iNkosi uMichael wenza isitatimende, "Lackey Russian" ngokuqedwa kwesivumelwano 1944 ukubambisana noHitler, ukuboshwa Antonescu futhi kuvulwa phambi ukuze amabutho aseSoviet. UMongameli akafikanga iPhalamende, kuphendulwa umbuzo Mihai ngosuku lwakhe lokuzalwa. On the ingxenye indlu yobukhosi emva ukungqubuzana ngokuvamile elibucayi yezwakala maqondana inqubomgomo bezingelwa uMongameli.
Ngo-2013, uMongameli Basescu uzwakalise ukweseka umqondo babambelele inhlolovo kwi ukubuya yokubusa kwamakhosi.
Ekupheleni 2013th kwamenyezelwa inhloso yakhe ukudala isimo esihlanganisiwe nge Moldova, okuyinto futhi awuzange osekelwa iziphathimandla baseMoldova.
10/05/2014 Romania ngaphandle incazelo kwaba wezasemoyeni avaliwe, okubangela indiza uhulumeni nge-Russian State Duma amasekela eholwa Dmitry Rogozin ayikwazanga undiza kusukela Transnistria emva imikhosi ngesikhathi imikhosi Victory Day.
21.12.2014 Romanian uMongameli Klaus Johannis isibe.
Umlingisi + umlingisi. "Orchid zasendle" nezibopho ze-Hymen